China မိတ်ကပ် Brush အပြည့်အဝသတ်မှတ်မည် China Manufacturers & Suppliers & Factory
မိတ်ကပ် Brush အပြည့်အဝသတ်မှတ်မည် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း မိတ်ကပ် Brush အပြည့်အဝသတ်မှတ်မည် ထုတ်ကုန်များ)
classical woodhandle မိတ်ကပ် brush ကိုအပြည့်အဝထား
classical woodhandle မိတ်ကပ် brush ကိုအပြည့်အဝထား အဆိုပါ Black ကလူမီနီယံ ferrule, 100% Eco-friendly ဒြပ်ဆံပင်နှင့်အတူသက်သတ်လွတ်သစ်သားလက်ကိုင်နှင့်အတူဤ 12piece နျ Classical woodhandle မိတ်ကပ် brush ကိုအပြည့်အဝထား။ ဤသည်ကိရိယာအစုံတို့ပါဝင်သည်: · 01 Powder Brush: ဤကြီးမားသော fluffy ဖြီးနှင့်အတူအချို့သောအမှုန့်ပေါ် dusting...
ထုပ်ပိုး: Packaging Details 1.Opp ပလပ်စတစ်သည်မိတ်ကပ်ဖြီးခြင်းအတွက်အထုပ်ဖြစ်သည်။ ၂။ စိတ်ကြိုက်အထုပ်ကိုဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အနေဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
၎င်းသည်သင်ဝယ်ယူမည့်အကောင်းဆုံးဖောင်ဒေးရှင်းမိတ်ကပ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသောသိပ်သည်းမှု၊ ဤ Flat Top Kabuki Brush သည်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်လိမ့်မည် Foundation Brush သည်အဆီမပါသောအလွန်ပါးလွှာသောဆံသားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးနူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီးအထိခိုက်မခံနိုင်သောအသားအရေကိုလုံခြုံစေသည်။...
ထုပ်ပိုး: Packaging Details ၁။Opp ပလပ်စတစ်သည်မိတ်ကပ်ဖြီးခြင်းအတွက်စံသတ်မှတ်ထားသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၂။ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသောအထုပ်ကိုဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အနေဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ၃. စက္ကူဘူးတွင်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားရှိသည်။ အရွယ်အစားကိုဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အ
PEREMIUM SYNTHETIC brush: စုတ်တံတစ်ခုစီကိုလက်ဖြင့်စုစည်းပြီးတစ် ဦး ချင်းစီထုပ်ပိုးခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့်သောဒြပ်ထည်ဖိုင်ဘာပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထိခြင်းနှင့်ခံစားခြင်း၊ သင်၏သဘာဝအလှအပကိုပြသပြီးအချောသပ်ပြီးချန်ထားမည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မျက်လုံးထုတ်လုပ်မှု -...
ထုတ်ကုန်အကြောင်း ထိတွေ့မှုမှနူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောစုတ်တံများသည်သိပ်သည်းပြီးကောင်းစွာပုံဖော်ထားသည်။ မိတ်ကပ်လိမ်းရန်နူးညံ့သော်လည်းခိုင်မာသည့်အပြင်မိတ်ကပ်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလည်းဆူးလေများသည်မကျဆင်းပါ။ Synthetic & အဆင့်မြင့်သောသဘာဝ Brush ဆံပင်၊ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးစျေးနှုန်းကြီးသည်...
Petal Brush Flat Trace ဖောင်ဒေးရှင်းမရှိပါ ဒီတစ်ခုတည်းသော Fundation စုတ်တံအစုံသည်နူးညံ့သောဒြပ်ဆံပင်များ၊ ပလက်စတစ်လက်ကိုင်များဖြစ်သည်။ Professional ဒီဇိုင်း၊ နေ့စဉ်မိတ်ကပ် artistry အတွက်လိုအပ်သောဖြီး။ သင်ကပိုင်ဆိုင်ပြီးတာနဲ့သင်ကထာဝရထာဝရချစ်လိမ့်မယ်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း နွေးသောရေ +...
min ။ အမိန့်: 2000 Bag/Bags
ခရီးသွားများအတွက် Mini 7pcs Makeup Brush Set ဒီ Mini 7pcs Makeup Brush Set သည် I ည့်သည်များအတွက် Mini သစ်သားလက်ကိုင်နှင့်အလူမီနီယမ် ferrule နှင့် ၁၀၀% Eco-friendly ဒြပ်စင်နှစ်ခုပါသောဆံပင်နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ ဒီကိရိယာမှာ အမှုန့်ဖြီး အစိုင်အခဲပျော့ပျောင်းသောပျော့ပျောင်း...
အနက်ရောင်ပျော့ပျောင်းသောဓာတုဗေဒဆံပင်သည်သင့်ကိုအဆင်ပြေဆုံးအတွေ့အကြုံကို ပေး၍ အရေပြားကိုမထိခိုက်စေပါ ရောင်စုံသစ်သားလက်ကိုင်များသည် ပို၍ ပင်ကြည့်ရှုနိုင်သည် ပြီးပြည့်စုံသောဆက်သွယ်မှုအတွက်တောက်ပသောသတ္တုပြွန် ခြုံငုံ။ ပြောရလျှင်ယခုနောက်ဆုံးမိတ်ကပ်ဖြူသည်သင်၏အလှအပကိုလိုက်စားသည်...
အလွန်ချစ်စရာကောင်းသော 7pcs အလှကုန် Mini Makeup Brush Set FOR + Powder + BLUSH + CONCEALER + Define + HIGHLIGHTER + Blending brush + Eye SHADOW အလွန်ချစ်စရာကောင်းသော 7pcs အလှကုန် Mini Makeup Brush Set အလူမီနီယမ် ferrule၊ ၁၀၀% Eco-friendly မီးခိုးရောင်အောက်၊ အဖြူအထွတ်ဆုံး Nano wire...
Professional ကအလှကုန်မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည် Powder + ဖုံးကွယ် + မျက်နှာမပျက် + မီးမောင်းထိုးပြ + ပြားပုံသဏ္ဍာန်ဖြီး + မျက်လုံးအရိပ် + မျက်ခုံးဖြီး + နှုတ်ခမ်းဖြီး FOR 8 သတ်မှတ်ပေးသည် Smudge Brush စတိုင် Professional ကအလှကုန်မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည် အဆိုပါပလတ်စတစ်ဟာလူမီနီယံ ferrule, 100% Eco-friendly Nano wire...
Smudge Brush ပုံစံ7Piece ကိုတက်စေပါမိတ်ကပ်ဖြီး Powder + ဖုံးကွယ် + မျက်နှာမပျက် + မီးမောင်းထိုးပြ + မျက်လုံးအရိပ် + မျက်ခုံးဖြီး + နှုတ်ခမ်းဖြီး FOR7သတ်မှတ်ပေးသည် Smudge Brush ပုံစံ7Piece ကိုတက်စေပါမိတ်ကပ်ဖြီး အဆိုပါပလတ်စတစ်ဟာလူမီနီယံ ferrule, 100% Eco-friendly Nano wire ကိုဆံပင်နှင့်အတူ,...
ထုပ်ပိုး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ
ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အသေးစိတ်နိဒါန်း 1. ဆံပင်: အညိုရောင်အောက်ခြေနှင့်အနက်ရောင်အကြံပေးချက်များနှင့်အတူဖျဒြပ်ဆံပင်, အဂန္ထဝင်အသွင်အပြင်တင်ဆက်ထားတဲ့။ အမျိုးမျိုးသောမိတ်ကပ် brush ကိုကွဲပြားခြားနားသောမိတ်ကပ်လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ multi-functional ဖြစ်စေအလှကုန်စုတ်တံမျက်နှာ, ပါးခြင်းနှင့်မျက်စိအဘို့အသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်။...
ဒါဟာပန်းရောင် Pearly မိန်းကလေးရဲ့သစ်သားလက်ကိုင်မိတ်ကပ် brush ကိုတစ်ဦးအမှုန့်ဖြီးတစ်ဦးမျက်နှာဖြီးတစ်ပြားချပ်ချပ်ဖြီးတစ် high-gloss ဖြီးတစ်ဖုံးကွယ်ဖြီး, မျက်စိ socket ဖြီးတစ်ဦးနှုတ်ခမ်းဖြီးတစ် mascara ဖြီး, နှင့်တူသောပါဝင်သည်။ အဆိုပါလက်ကိုင်မိတ်ကပ် brush ကို၎င်းမိတ်ကပ်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောကြောင်းနှင့် float မထားဘူး,...
သစ်သား set 7PCS သောကျောက်တို့သည်စပါးကိုမိတ်ကပ်ဖြီး ဒီအလူမီနီယံ ferrule, 100% Eco-friendly ဒြပ်နှစ်ခုအရောင်ဆံပင်နှင့်အတူသစ်သားသတ်မှတ်ထားသောကျောက်တို့သည်စပါးကိုမိတ်ကပ် brush ကို 7PCS ။ ဤသည်ကိရိယာအစုံတို့ပါဝင်သည်: အမှုန့်ဖြီး tapered, ပျော့ပျောင်းနှင့် fluffy bristles ချောမွေ့တဲ့,...
ခရမ်းရောင်အရောင်မိတ်ကပ်ဖြီးထား ကိုရွှေအရောင်လူမီနီယံ ferrule, 100% Eco-friendly ဒြပ်နှစ်ခုအရောင်ဆံပင်ထွန်းလင်းနှင့်အတူဤက Short လက်ကိုင်မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်။ ဤသည်ကိရိယာအစုံတို့ပါဝင်သည်: အမှုန့်ဖြီး tapered, ပျော့ပျောင်းနှင့် fluffy bristles ချောမွေ့တဲ့, သဘာဝကြည့်ဘို့အညီအမျှအမှုန့်မျက်နှာရောနှောနေခြင်း ဖုံးကွယ်ဖြီး...
သစ်သားလက်ကိုင်နှင့်အတူဒြပ်ဆံပင်မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်
ကွယျအတိပွီးမိုဃ်းကောင်းကင်၏ထွန်းလင်းပလပ်စတစ်လက်ကိုင်တစ်စိတ်ကူးယဉ်အာကာသနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းဖြီးဖြစ်ပါတယ်။ fluffy ပျော့ဆံပင်သင့်ရဲ့အသားအရေကိုအများဆုံးအဆင်ပြေခံစားပေးသည် အဆိုပါမိတ်ကပ်အလှကုန်ဖြီးထားသင်ဘာမှအဆင်သင့်မရကူညီပေးဖို့လိုအပ်မိတ်ကပ်စုတ်တံအပေါငျးတို့သရှိပါတယ်!...
5 ပိုငျးပိုငျးတောက်ပပလတ်စတစ် Handleand မိတ်ကပ် Brush Kit
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ် YACAI 5pcs မိတ်ကပ်အလှကုန်ဖြီးထားသင်ဘာမှအဆင်သင့်မရကူညီပေးဖို့လိုအပ်မိတ်ကပ်စုတ်တံအပေါငျးတို့သရှိပါတယ်! YACAI 5pcs မိတ်ကပ်အလှကုန်ဖြီးထားတဲ့အထူးဒီဇိုင်းဖြီးပိုပြီးအဆင့်မြင့်နေ့စဉ်ဘို့အစုံသို့မဟုတ်ခရီးသွားနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုစုတ်တံကိုရှာဖွေနေ။ ဒါဟာနေ့စဉ်မိတ်ကပ် artistry...
တောက်ပနေစိတ်ကြိုက် High Quality မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်
မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်ရန်အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်း 5pcs မိမိစိတ်ကြိုက် Logo ချစ်စရာမိတ်ကပ်အသစ်လွင်ဆုံးပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်ပေးသည်ဝှေ့နေတယ် * ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုတ်တံပေါ်ပရီမီယံ Synthetic ဆံပင်တောက်ပပျော့ပါ! ကျွန်ုပ်တို့၏စုတ်တံဆံပင်သွန်းလောင်းသို့မဟုတ်သင့်အသားအရေကိုထိခိုက်စေပါဘူး။ *...
မှတ်တမ်းသစ်သားလက်ကိုင်နှင့်အနက်ရောင်ဒြပ်ဆံပင်ပေါင်းစပ်နှင့်အတူအမှုန့်ဖြီးသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖျ Powder Brush မှတ်တမ်းအရောင်သစ်သားလက်ကိုင်နှင့်လူမီနီယံပြွန်၏အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော application များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းနေ့စဉ်မိတ်ကပ် artistry အတှကျလိုအပျသောဖြီး။...
ဝါသနာရှင် Brush နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖြတ်ညင်သာစွာတစ်ဦးရဲမီးမောင်းထိုးပြဘို့အမှုန်အပေါ်ချင်းနှင်းနှင့် dusts ချောမွေ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးသင့်ရဲ့အသားအရေမှထုတ်ကုန်လွှဲပြောင်းရန်ကူညီပေးသည် အဆိုပါမိတ်ကပ် brush ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်ဤသုံးပါးလွယ်ကူသောခြေလှမ်းကိုလိုက်နာပါ: အဆင့် 1:...
သစ်သားလက်ကိုင်စူပါဗာ Brush နှင့်အတူ Panda စံနမူနာ
ထူးခြားတဲ့အရောင်များ Air ကိုကူရှင် Puff
မိတ်ကပ် Brush အပြည့်အဝသတ်မှတ်မည် မိတ်ကပ် Brush အပြည့်အဝသတ်မှတ်ပေးသည် မိတ်ကပ် Brush ခရီးသွားသတ်မှတ်မည် မိတ်ကပ်အိတ်သတ်မှတ်မည် မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည် Beginner တွေအိတ်ဆောင် Brush အပြည့်အဝသတ်မှတ်မည်5PCs မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည် 10 PCs မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်